Sina 660-6 * 60W Pixels mifehy ny bara zom-baravarana mihetsiketsika loha tsy misy famokarana rotationg sy Factory | Mihoatra
660-6 * 60W Pixels mifehy bara zoom zoom mihetsika loha tsy misy rotationg voafetra
6 * 60W Pixels fanaraha-maso bara fanamafisam-peo mihodina lohan-doha tsy misy rotationg voafetra dia hazavana fanavaozana amin'ny fahefana avo Led lohany mihetsika. Ny lohan'ny Linear miaraka amina fihodinana tsy misy fetra haingana, 6 teboka dia manome andry 3 ° tery ary be dia be 45 °, ny andry mahery dia ampifangaroina miaraka amin'ny fanasana famirapiratanana avo. Maherin'ny 13 volana ny tsingerina R&D dia namaha ny vahaolana amin'ny fanaparitahana hafanana mitovy sy ny fihoaram-pefy mavesatra. Tsy maninona miasa toy ny jiro fanasan-damba, jiro vokatra, hazavana ivelany na hazavana mialoha, azo aseho izany.
6 * 60W Pixels mifehy bara fanamafisam-peo mihetsika tsy misy fetra voafetra
Raha vantany vao nalefa eny amin'ny tsena ity hazavana ity dia tian'ny mpanjifa mafana izy. Famirapiratanana 6 avo voakaraka amin'ny zoro 3 ° faran'izay tery, manomeza vokarin'ny tsipika mahafinaritra. Fihetsiketsehana haingana sy vilany & fitongilana dia fihodinana tsy misy fetrany 360 °, afaka mamorona vokany vokany eo amin'ny sehatra. Max 45 ° zoro mibontsina be dia be ny vokany. Izy io dia mety ampiasaina amin'ny jiro, fanasana, jiro piksela na jiro vokarina.
Loharano nateraka 6 * 60W rgbw 4in1 LED Fanapahan-kevitra Pan / Tilt 8/16 kely
Sudin'ny zana-kazo 3 ° - 45 ° Pan / Tiit 360 ° fihodinana tsy manam-petra
Fanjifana herinaratra 450W
Mode DMX 25/45 Channels Data ao amin'ny foibe / Out Socket XRL 3-pin & 5-pin
Vokatry ny piksel Naoty fiarovana IP20
0-100% milamina famaritana
Rafitra optique haingam-pandeha avo lenta voapetraka hooks lafiny 640 * 210 * 400mm; NW: 17,5 kilao
Vato tery & manasa effets zoom Fonosana mahazatra: baoritra; tranga sidina raha azo atao
Moto dingana telo haingam-pandeha avo lenta, mahery vaika, haingana kokoa ary malama kokoa Fanamarinana
Vokatry ny andry mahery mamirapiratra
Fiarovana ny mari-pana mitarika & Fan mihazakazaka hafainganam-pandeha mandeha ho azy mifototra amin'ny mari-pana loha CE, ROHS
F: Tsy hitako ny vokatrao taloha, ahoana no hinoako ny kalitaonao？
Re: Ny orinasanay efa eo amin'ny sehatry ny hazavana eo amin'ny sehatry ny 10 taona mahery, tamin'ny fiandohan'ny nananganana anay dia manomboka manao vokatra R&D izahay ary mifantoka amin'ny hazavam-bolo nateraka, indrindra amin'ny lohan-doha mihetsika. Ka raha tsy tsara ny kalitaontsika dia tsy afaka mihalehibe isika.
Re: izahay dia any Baiyun manelingelina ny tanànan'i Guangzhou any Shina
Teo aloha: F720-Fahefana mahery manasa fanasan-dàlana zoom zoom any ivelany miaraka amin'ny 18x40W led
Manaraka: 760-7x60W borosy fanasan-damba sy tantely tantely vokany nitarika loha mihetsika amin'ny varotra mafana